About Us - Shijiazhuang Yichen caaga Floor Co., Ltd
YICHEN SOPRTS CO SAGXADA BALAASTIKADA., LTD
Iyadoo iimaanka iyo tayada ugu fiican ee wanaagsan, waxa aan noqday hoggaamiyaha brand caalamiga ah ee dabaqa caag ah.
Shirkadda Our helay 2006. Waxaa la koray out of State iyo enterprisewho Collective dawlad loo abuuray 1984, mid ka mid ah horyaal ee cilmi baarista & Horumarinta iyo soo saarida PVC Gogosha caag ah. Waxaan leenahay koox u gaar ah xirfad madax banaan cilmi-baarista iyo horumarinta, in loo ballan qaaday our hoggaanka in industry Chinese Gogosha caaga-PCV ee sannado badan.
Bilowga Oogidda Yichen, waxaan inta badan siin our madax banaan cilmi-baaris iyo in la horumariyo PVC Gogosha taxanaha ciyaaraha for our qoyska &
qaybiyaha caalamiga ah iyo shirkad injineernimada, helitaanka sumcad aad u wanaagsan ka macaamiisheena. Isla mar ahaantaana, aan theinnovation qaado fikradda horumarinta ah, sii cilmi baarista iyo horumarinta waxyaabaha cusub. In 2014, waxaan bilaabay taxane ah oo dhulka oo ganacsi, oo ay ku jiraan taxane hadhuudh marmar PVC sagxadda dhulka, taxane kindergarten UV PVC sagxadda dhulka, PVC Gogosha ganacsi la taageero cufnaanta iwm, siinta tayo dheeraad ah oo sare iyo
Waxaan soo maray shahaadada ISO, 9001, ISO14001, BV of France, BWF iyo CE iwm Intaa waxaa dheer, waxaan noqday xubin ka mid ah qolkii Xeber oo ka mid ah E-Ganacsiga iyo mid ka mid ah ganacsiga agaasimaha daacad ah Yanzhao Chamber of E-ganacsiga ee 2013 . Hebei Chamber of E-Commercial waa qolkii ugu horeysay dhoofinta ganacsiga ee ganacsi ee gobolka Hebei.
Waxaan Yichen dad addeeci ruux ganacsi ee "Samee nafteena in bulshada by daacadda, gaadho our mustaqbalkiisa by iimaan, badbaadaan tayada, horumarinta la wada noolaanshaha." Iyo qaato "Waxaa jira kaliya in fikirka off-xilli, laakiin ma suuqa ka baxsan xilliga ; Waxaa jira oo keliya a fikirrada daciif ah, laakiin ma suuqa daciif ah "mabda hawlgalka our, ka shaqeeya si wanaagsan, siinta alaabta oo tayo leh ka badan oo sare iyo adeeg wanaagsan loogu talagalay macaamiisha ka badan. Yichen waa doorashadaada wanaagsan ,. aynu u wada shaqeeyaan oo isu soo dhiso mustaqbal wanaagsan.